दशैंमा टिकट : मोबाइल नै बन्न सक्छ टिकट काउन्टर - Ratopati
दशैंमा टिकट : मोबाइल नै बन्न सक्छ टिकट काउन्टर
भदौ २१ | भरत पाण्डेय
काठमाडौं – नेपालीको महान् चाड दशैं आउनै लाग्यो । कामको सिलसिलामा काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका धेरै मानिस दशैंमा जसरी पनि घरमा पुग्छन् । तर दशैंमा घर जाने भन्नेबित्तिकै गुल्मी धुर्कोट वस्तुका झविन्द्र विश्वकर्मालाई बसको टिकटको झन्झटले नै पिरोल्छ । ‘अफिसमा बल्लतल्ल बिदा मिलाएर बिहानै ४ बजे बसपार्क पुगेर घन्टौँ लाइनमा बसेर टिकट ल्यायो, घर जाने बेला पाँचजनाले त्यही सिट दाबी गर्छन्,’ उनी हरेक दशैंको पीडा सम्झन्छन्, ‘अनि झुन्डिएर, उभिएर, बोमिट गर्दै अतालिँदै दिनभरिको यात्रा ।’
गुल्मी र अर्घाखाँची त दशैंमा टिकटका लागि सबैभन्दा धेरै लाइन बस्नुपर्ने समस्या भएका जिल्ला हुन् । यो पीडा देशभरिका धेरै यात्रुलाई छ । उपत्यकाबाहिर घर भई कामका लागि काठमाडौंमा बसेका लाखौँ जनता दशैंमा घर जानका लागि गाडीको टिकट नपाएर घन्टौँ लाइन बस्नुपर्छ । पहुँच हुनेहरू सोर्सको आधारमा टिकट लिन्छन्, बलिया–बांगा लाइनमा लडेर टिकट लिन्छन् । तर, पहुँच नहुने, महिला, जागिरबाट फुर्सद नहुने र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरू भने टिकट नपाएर सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले यसका लागि सहज तरिकाले दशैंको टिकट लिने व्यवस्था गरौं भन्ने आश गर्न थालेको धेरै वर्ष भयो, तर अवस्था जस्ताको तस्तै छ । ‘कमसे कम बेलैमाथि छलफल गरेर पर्याप्त गाडीको व्यवस्था गर्ने ग¥यो भने उभिएरै रातदिनको यात्रा गर्नुपर्ने थिएन नि,’ काठमाडौंमा पत्रकारिता गर्दै आएका दाङका तुलसी सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले त प्रविधिको युग छ, प्रविधिको प्रयोग गरेर टिकट पनि अनलाइनबाट काट्ने व्यवस्था ग¥यो भने झन् कति सजिलो होला ।’
अहिले प्रविधिको युग हो । यसको सदुपयोग गरियो भने जस्तोसुकै जटिल काम पनि सहजताका साथ सम्पन्न हुन्छ । पहिले टेलिफोन, खानेपानी, विद्युत्कोे बिल तिर्न काउन्टरका लाइनमा बसेर धेरै समय खेर फाल्नुपर्ने अवस्था थियो । एकातिर समयको खर्च अर्कोतर्फ काउन्टरसम्म पुग्नको झन्झट र खर्च । तर, अहिले आएर मोबाइल वा कम्प्युटरबाट एक क्लिकमै बिल तिर्न सकिन्छ, जसले गर्दा समय र पैसा दुवैको बचत हुन्छ ।
यातायात व्यवासायी महासंघले अनलाइन प्रविधिबाटै यात्रुलाई सेवा पु¥याउनका लागि तयारी गरिसकेको जनाएको छ । ‘अनलाइनबाटै टिकटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर हामी लागेका छाँै,’ महासंघका उपाध्यक्ष डोलनाथ खनालले भने । उनले यातायात व्यवसायीको फाइदाका लागि भन्दा पनि यात्रुहरूको सहजताका लागि आफूहरूले यसपटक भरपर्दो व्यवस्था गर्ने बताए । उनले अनलाइन टिकटिङ गरिरहेको बससेवा डटकमसँग कुरा भइरहको बताए ।
अनलाइनबाटै विभिन्न किसिमका बिल भुक्तानी गर्न, सपिङ गर्न सकिने प्रविधिको विकास भइरहेका बेला पछिल्लो समय अनलाइनबाटै बसको टिकट काट्न सकिने प्रविधिको विकास गरेको बससेवा डटकमले यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवस्था विभागलाई अनलाइन टिकटिङका लागि प्रस्ताव समेत गरेको छ । घरमै बसेर आफू जाने गन्तव्यको टिकट काट्न सकिने प्रविधिको विकास गरेको बससेवा डटकमले दशैंमा सहजताका लागि सरकारी निकाय र यातायात व्यवसायीसँग प्रस्ताव समेत पेस गरेको बससेवा डटकमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम खनालले बताए ।
सधैंजसो ढिला गरी यातायातको व्यवस्था गरेको आरोप लागिरहेको यातायात व्यवस्था विभागले पनि यो वर्ष चाँडै नै छलफल चलाउने जनाएको छ । जनताले जसरी धेरै सुविधा पाउँछन्, त्यसका लागि आफूहरूले छलफलमार्फत व्यवस्था गर्ने विभागका निर्देशक मुक्तिबहादुर केसीले बताए । ‘एक–दुई दिनमा मिटिङ बसेर हामीले केही योजना बनाउने तयारीमा छौँ,’ निर्देशक केसीले भने, ‘जनताले सुविधा पाउँछन् भने जसरी सुविधा पाउँछन्, त्यसरी व्यवस्था गर्छौं ।’ उनले पहिलेजस्तै टिकट काट्ने तर जान नपाउने अवस्था नआओस् भनेर सचेततापूर्वक काम गर्न लागिएको बताए ।
सरकार र व्यवसायीले चाहे मोबाइल नै बन्न सक्छ टिकट काउन्टर
पर्शुराम खनाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बससेवा डटकम
अनलाइनबाट टिकट काट्ने प्रविधि के हो र यसबाट यात्रुलाई के फाइदा हुन्छ ?
बससेवा डककम भनेको अनलाइनबाट बसको टिकट काट्ने एउटा माध्यम हो, जसले यात्रुलाई एक ठाउ“बाट अर्को ठाउ“मा जा“दा सरल, सहज र भरपर्दो तरिकाले आफूले रोजेको र खोजेको बसका सिटहरू छानेर टिकट काट्न सकिने सेवा उपलब्ध गराउ“छ । हामीले कुनै यात्रुलाई बस टिकट काट्नका लागि टिकट काउन्टरसम्म पुग्न नपरोस्, उसले अनलाइनबाट आफैँ वा साइबर, कम्युनिकेसन, ट्राभल्स, होटलबाट टिकट किन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो सेवाको सुरुवात गरेका हौं ।
अब यात्रुको हकमा काउन्टरसम्म जान नपरेपछि समय र पैसा दुवैको बचत भयो । उनीहरूले घरमै बसेर काउन्टरकै दररेटमा टिकट काट्न पाए । यात्रुले बस छुट्ने समय र पुग्ने समयको स्पष्ट जानकारी घरमै बसेर पाउने भए । आफूलाई मन पर्ने बसको मन पर्ने सिट रोजेर काट्न सकिने अवस्था रह्यो । त्यसैगरी यातायात व्यवसायीले पनि अनावश्यक खर्च, एजेन्ट, धेरै स्थानमा रहेका काउन्टर घटाउन सक्ने भए । बस व्यवसायीले आफ्ना काउन्टर घटाएर अप्रेसन कस्ट घट्ने भयो । यात्रुहरू जहिले पनि राम्रो सेवा दिने यातायातमा यात्रा गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पनि विदेशबाटै आफैँ टिकट काट्न सक्ने भए, कहा“बाट कति टिकट बिक्री भए भन्नेकुरा सिस्टममा रहने भएकाले पारदर्शिता कायम हुन्छ । यात्रुको विवरण पनि डाटाबेसमा सधैंका लागि रहने गर्छ । अर्कोतिर टिकट डबल पर्ने सम्भावना हुँदैन । किनकि यसमा सबै कुरा सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ । यातायात Ôेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यो निकै उपयोगी छ ।
कसरी आयो अनलाइन बससेवा सञ्चालन गर्ने सोच ?
विदेशमा हेर्ने हो भने विभिन्न प्रविधि छन् । बसको टिकट काट्नका लागि लाइनमा बस्नुनपर्ने अवस्था छ । जस्तो भारतमा रेडबस डटकमलगायत ३०÷४० वटा अनलाइन छन् । अहिले प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा बैंकिङलगायत अन्य क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको अवस्था छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर बस टिकटका लागि काउन्टरसम्म जानु नपरोस् । घरमै बसेर आफ्नो गन्तव्यका लागि टिकट लिन सकियोस् भन्ने सोच आयो । सुरुवातमा दुईवटा चिजले गर्दा प्रेरणा जाग्यो । एउटा त मेरो घर अर्घाखाँची सधैँभरि घरमा जाँदा बस काउन्टरसम्म पुग्यो, लाइन बस्यो अनि कहिले त टिकट नपाएर हैरान । फेरि अर्घाखाँची र गुल्मीका लागि दशैंमा सबैभन्दा लामो लाइन बस्नुपर्ने । त्यो पीडा भोगाइले पनि नयाँ तरिका केही छ कि भनेर नयाँ कुरा सोचियो । अर्को कुरा देश–विदेशमा भएका ट्रेन्डहरूको पनि अवस्था हेरेर यसरी बससेवा सञ्चालन गरियो ।
अर्को कुरा, गाडीवालाले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर गाडी हाल्नुभएको हुन्छ । त्यसमा वाइफाई, एसीलगायत अन्य सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा गरिरहनुभएको छ । यात्रुकै लागि भनेर यति धेरै सुविधा थप गरिरहनुभएको छ । तर, यात्रुले टिकट काट्नकै लागि भने काउन्टरसम्म पुगेको छ । दुःख पाएको छ । यो कुरामा व्यवसायीले अलि ध्यान पु¥याउन सकेनन् । त्यसैले यो कुरालाई मध्यनजर गरेर उहाँहरूले यात्रुलाई घरमै बसेर टिकट काट्न सकियोस् भनेर चाहनुभयो भने यो प्रविधि उहाँहरूलाई उत्तम हुन्छ ।
दशैंका लागि टिकट बुकिङ गर्ने केही सोच छ कि ?
दशैंमा हामीले दुई वर्षदेखि अनलाइनको माध्यमबाट बसको टिकट काट्दै आएका छौँ । यातायात व्यवसायीसँगको सहकार्यमा यसो गरिएको हो । पूर्वी तराईका रुटहरू र पश्चिमका केही भूभागका लागि पनि अनलाइनबाटै टिकट काट्ने व्यवस्था गरिएको छ । सधैं नै हामीले बस टिकट काट्ने काम त गरिरहेका छाँै । त्योभन्दा पनि दशैंका लागि टार्गेट गरेर हामीले घरमै बसिबसी टिकट काट्न सकियोस् भनेर यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवसायी महासंघमा प्रस्ताव पठाएका छौँ । त्योअनुसार एक–दुई चरणको कुरा पनि भएको छ । त्यो कस्तो छ भने हामीसँग भएको प्रविधि प्रयोग गरेर यात्रुहरूले बस टिकट पाउनका लागि विशेष गरेर दशैंका लागि छुट्टै काउन्टर स्थापना गर्ने, बिहानै ४ बजेदेखि लाइन लाग्ने, मानवीय त्रुटिका कारण टिकटहरू दोहोरिने समस्या सधैं नै सुन्नमा आउँछन् । हामीसँग भएको प्रविधिको प्रयोग गरियो भने त्यो समस्या समाधान गरेर सहजताका साथ टिकट काट्न सकिन्छ । यातायात व्यवसायीलाई पनि फाइदा, यात्रुलाई पनि सहज हुन्छ । घरमै बसेट टिकट काट्न सकिने कुरालाई लक्षित गरेर यातायात व्यवसायीलाई पनि प्रस्ताव पेस गरेका छाँै ।
यो प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने घरबाटै वा नजिकैको साइबरबाटै टिकट काट्न सकिन्छ । अहिले हामीले दैनिक तीन सयको हाराहारीमा अनलाइनबाट बस टिकट दैनिक काटिरहेका छाँै । दशैंमा एक हजारसम्म टिकट जारी गर्न सक्छौँ । किनकि हामी आफैँ टिकट जारी गर्ने निकाय होइन । यातायात व्यवसायीसँगको सहकार्यमा उहाँहरूले दिने टिकटलाई जारी गर्ने हो ।
प्रस्ताव व्यवसायीले स्वीकृत गरे भने कसरी काम हुन्छ ?
हाम्रो प्रविधि र जनशक्ति सबै तयारी अवस्थामा छ । यदि उहाँहरूले प्रस्तावना स्वीकृत गरे भने एक घन्टाभित्र हामीले टिकट बुकिङ सुरु गर्न सक्छाँै । हुन त अहिले पनि टिकट काटिरहेकै छौँ, निश्चित सिट संख्या छुट्याएर । तर यदि दशैंका लागि अग्रिम बुकिङ गर्ने हो भने एउटा गाडी काउन्टरबाट टिकट काट्ने, अर्को अनलाइनका लागि छाडिदिने गरियो भने सहज हुन्छ ।
यात्रुलाई पनि सजिलो, व्यवसायीलाई पनि सजिलो र टिकट काउन्टरका कर्मचारीलाई पनि सहज हुने प्रविधि हामीसँग छ । यदि यातायात व्यवसायीले यदि सहज रूपमा टिकट उपलब्ध गराउनुहुन्छ भने हामी सबै छलफल गरेर काम गर्न सकिन्छ ।
अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिने भएपछि पुराना टिकट काट्ने काउन्टरहरू विस्थापित हुन्छन् ?
त्यस्तो हुँदैन । अहिले उहा“हरूले जे गरिरहनुभएको छ, उहा“हरूको काम त्यही नै हुनेछ । तर, फरक यति हो, अहिले हातले लेखेर टिकट काट्नुहुन्छ, यो प्रविधि भएपछि कम्प्युटरले टाइप गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट टिकट काटिदिन सक्नुहुनेछ । विभिन्न स्थानमा रहेका काउन्टरमा फोन गरेर सिट मागेर टिकट काट्नुनपर्ने हुँदा उहा“हरूलाई अझ बढी फाइदा छ । अर्कोतर्फ पहिलो व्यक्ति पहिलो सेवाका आधारमा टिकट वितरण गर्न सकिने हुनाले तथा उहा“हरूको कम्प्युटरमा दक्षता समेत बढ्ने हु“दा उहा“हरूप्रतिको विश्वसनीयता समेत बढ्छ । टिकट काट्ने उहा“हरूले नै हो । हामी त अनलाइनबाट टिकट काट्न सकिने प्रविधि वितरण गर्ने र त्यो प्रविधिको रेखदेख गर्ने हो । एउटा काउन्टरबाट अर्को काउन्टरमा फोन गर्नुपर्ने समस्या हटेपछि उहा“हरूको खर्च कम हुन्छ । उहा“हरूलाई यसले विस्थापित होइन, अझ बढी स्थापित गर्नेछ ।
अनलाइनबाट टिकटको रकम भुक्तानी कसरी गर्ने ?
टिकट काट्नका लागि http://www.bussewa.com/ मा गई आफ्नो गन्तव्य छान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सिट छान्ने र यात्रुको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । विवरण भरिसकेपछि ई–सेवामार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ । ई–सेवा एकाउन्ट भएका प्रयोगकर्ताले अनलाइनबाट आफैँ टिकट काट्न सक्छन् र भुक्तानी गर्न सक्छन् । तर ई–सेवा एकाउन्ट नभएका अन्य सर्वसाधारणले चोक–चोकमा रहेका साइबर, कम्युनिकेसन पसल तथा होटल र ट्राभल एजेन्सीबाट पनि टिकट काट्न सक्छन् ।